Broadcast Pix သည်ဗားရှင်း ၅.၀ ဆော့ဝဲလ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 5.0 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထုတ်လွှင့် Pix ဗားရှင်း 5.0 ဆော့ဝဲဦးလွတ်မြောက်
New Virtual Studios ကကင်မရာခြေရာကောက်မရှိရင် high-end ရဲ့ Virtual သတ်မှတ်ပေးသည်ဘဝမှကယျတငျ
Billerica, မက်ဆာချူးဆက် - ထုတ်လွှင့် Pix™ယနေ့က၎င်း၏ကျောက်™နှင့် Mica ™ဘက်ပေါင်းစုံ၎င်း၏ဗားရှင်း 5.0 ဆော့ဖ်ဝဲရရှိမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ ထုတ်လုပ်မှု switcher။ အဆိုပါ software ကိုသစ်ကိုကို Virtual Studios က High-end မိတ်ဆက် ကို virtual set ကို ပလက်ဖောင်း, Third-party အိုင်ပီ-based ကင်မရာများနှင့် streaming များကရိယာများအတွက်တိုးချဲ့ထောက်ခံမှုကထပ်ပြောသည်နှင့်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ရင်းမြစ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူအကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များကိုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းပါဝင်သည်။
virtual Studios ကထုတ်လွှင့် Pix ၏ပါဝါကိုပေါင်းစပ် အထိရှစ်ကင်မရာများများအတွက်ခေတ်မီဆန်းပြားကို virtual နောက်ခံနှင့်အတူ ClearKey ™ chromakey နည်းပညာ။ သူတို့တစ်တွေကို virtual ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိကြ၏ကဲ့သို့အစုံအတွက်မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်အခြားသဘာဝကအလင်းရောင်ထိန်းသိမ်းအသုံးပြုပုံ On-screen ကိုအခွက်တဆယ်စုတခုနောက်ခံပေါ်သို့ paste လုပ်ထားတဲ့ဘဲ, လှပါတယ်။ သည်အခြားဗားရှင်း 5.0 Softwarebasic ကို virtual အစုံပေါင်းစည်းမတူဘဲ, Virtual Studios က Multi-box ကို DVE ရေးစပ်သီအပြည့်အဝမျက်နှာပြင်ခဲ့သည်ဆို၏သို့မဟုတ် box ကိုအကျိုးသက်ရောက်သို့ပြန်ညှစ်ခံရဖို့ခွင့်ပြု - ခြင်းနှင့် optical ကင်မရာခြေရာခံခြင်းစနစ်များကိုမလိုအပ်ပါဘူး။
Move feature အဆိုပါ Virtual သတ်မှတ်မည်, အော်ပရေတာချဲ့ဖို့ခွင့်ပြု, optical ခြေရာခံခြင်းစနစ်များမရှိဘဲကင်မရာနှုန်းလေးရွေ့လျားအထိကယ်တင်ဒယ်အိုးနှင့်, ကို virtual အစုံသို့စောင်း - ပြီးတော့အသုံးပြုသူတစ်ဦး-သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောရွေ့လျားမှတ်မိသေးတယ်။ အဆိုပါရလဒ်အပို keyer အရင်းအမြစ်များနှင့်ကင်မရာကိုအော်ပရေတာမသုံးဘဲကို virtual ကင်မရာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရွေ့လျားခြင်းနှင့်နောက်ခံတာဝန်ကျနေတဲ့ပြပွဲနှုန်းအခြေခံပေါ်မှာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ဒါကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်ဍာအကြားရူပပြောင်းလွယ်ကူသည်နေကြသည်။ Plus အား, ထို AutoFlags feature ကိုသင်တစ်ဦး4၏နှစ်ဖက်ပေါ်တွင်အနက်ရောင် pillarboxes အတွက်ဖြည့်ဖို့ဆိုနေဆဲနောက်ခံသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြု:3ထုတ်လုပ်မှု: တစ် 16 အတွက်9ပုံရိပ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ကားရိုးရှင်းသောဆွဲ-and တစ်စက်ဖြေရှင်းချက်ထက် ပို. လက်တွေ့ကျသောရလဒ်များသည်ကယ်တင်တော်မူသော Virtual စတူဒီယိုနှင့်အတူအံ့သြခံရဖို့သွားနေကြတယ်" ဟုကီဗင်မင်းသား, အသံလွှင့် Pix ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ဗားရှင်း 5.0 အတွက်အားလုံးတိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံပလက်ဖောင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့်လွယ်ကူကန့်သတ်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်မီဘဏ်ဍာထုတ်လုပ်ရန်ပါစေ။ "
အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အတူကမမှန်ကန်ကြောင်းရှုထောင့်အချိုးအဘို့အလျော်ကြေးပေးနှင့်မဟုတ်ဘဲအကြောင်းအရာတင်ပို့ခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းကဆုံးထက်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်အခြားအကြောင်းအရာများပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်, အမှတ်တံဆိပ်အားပြန်လည်နေရာချထားရန်ညှစ်ဗီဒီယိုကလွယ်ကူပါတယ်။ source control တခုမှာနှင့် keyer အသုံးချမခံရမီ DVE မှတဆင့်ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကင်မရာများခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အနိမ့်စဉ်ဆက်မပြတ်နှောင့်နှေးအဖြစ်ပြည်တွင်းရေးကလစ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်များအတွက်အသံလွှင့် Pix ရဲ့မူပိုင်နည်းပညာ၏အားသာချက်ကြာပါသည်။ Adjustments တကမ္ဘာလုံးအကြောင်းအရာတစ်ဦးချင်းစီကိုအပိုင်းပိုင်းအပေါ်ထုံးစံ setting များကိုခွင့်ပြုထားတဲ့, တာဝန်ပေးအပ်ကြသည်မဟုတ်။ Plus အား, ချိန်ညှိအရင်းအမြစ်ရလာဒ်ကဒိ၏လွယ်ကူသောပြန်လည်သိမ်းဆည်းများအတွက်နိုင်တဲ့ macro အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။
V5.0 software ကိုလည်းစက်ရုပ်ချဲ့ထွင် ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်မှု အပါအဝင်အိုင်ပီ-based ကင်မရာများ, တစ်အရေအတွက် Sony က BRC-Z330, BRC-900 နှင့် SRG-300 မော်ဒယ်များနှင့်မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်မော်ဒယ်များ။ Vaddio ကင်မရာစနစ်များလည်းအိုင်ပီနှင့် RoboSHOT, ClearVIEW နှင့် PowerVIEW ကင်မရာလိုင်းများအမှတ်စဉ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူထည့်ပြီးပါပြီ။ 12 မှတက်ကင်မရာများကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးရောနှောအပါအဝင်တဦးတည်းထုတ်လွှင့် Pix စနစ်ကတဆင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုပြီးချမှတ်ထားလွယ်ကူသောပြန်လည်သိမ်းဆည်းဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပြီး, built-in တာလီချိုးတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်-ဝေဟင် status ကိုဖော်ပြရန်ကင်မရာများမှစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အသစ်အ V5.0 Matrox ဧကရာဇ်၏ဘက်ပေါင်းစုံ IP ကိုထိန်းချုပ်သည် HD နှင့်ဧကရာဇ် HDX streaming များနှင့်အသံဖမ်းကရိယာ။ လွှနဲ့မှတ်တမ်းတင်တစ်ဦးချင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးစလုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတစ်ဦးတည်း-button ကိုတွန်းအားပေးစတင်ဖန်တီးရန်နိုင်တဲ့ macro program နိုင်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအစီအစဉ်များတစ်ခုပူးတွဲကွန်ယက်ကို drive ကိုဒါမှမဟုတ် USB drive ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ် - သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အမှန်တကယ်ဘက်ပေါင်းစုံလုပ်ငန်းအသွားအလာအဘို့အထုတ်လွှင့် Pix ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့-Folders ချိတ်ဆက်ထားပြီး။ ဖိုင်တွေကိုကလစ် store မှာပြုလုပ်ရန်ပြန်ကစားသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ခြင်းများအတွက် NLE စနစ်များကိုကူးယူနိုင်ပါတယ်။
အခြားအသုံးပြုသူများ $ 5.0 များအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်စဉ်ဗားရှင်း 995 ဆော့ဖ်ဝဲ, အာမခံအောက်မှာနေဆဲနေသောဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Flint ™နှင့် Roadie ™စနစ်များများအတွက်ဗားရှင်း 5.0 software ကိုမကြာမီရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အသံလွှင့် Pix အကြောင်း 2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix ကိုမဆိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်စက်ချုပ်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမိုဘိုင်းယူနစ်ကနေအကြီးစားဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့, တိုင်းအသံလွှင့် Pix မူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်နည်းပညာနှင့်သင့် Workflows ပိုကောင်းအောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်လွယ်ကူစေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည် toolset ပါရှိပါတယ်။ 110 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်အတူ, အသံလွှင့် Pix ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုထုတ်လွှင့်မှုအတွက် Switcher, streaming များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အမြင်အာရုံရေဒီယို applications များအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.broadcastpix.com.
ထုတ်လွှင့် Pix broadcast Pix, Inc မူပိုင်ခွင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်။ USA တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု switcher Software များ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual စတူဒီယို 2016-01-28
ယခင်: RTW နယူး EBU အသံကျယ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထောက်ပံ့
နောက်တစ်ခု: Soliton စနစ်များပထမဦးဆုံးအီတလီပြန်လည်ရောင်းချသူများကထပ်ပြောသည်